May-24… ဘာနေ့လဲ…မဲပေးရမယ့်နေ့ | The World of Pinkgold
ဗမာပြည်သား on May 26, 2008 at 9:08 am said:
မပင့်ရေ…. အမပြောတာလုံးဝထောက်ခံတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်းအဲ့နေ့က လုံးဝကိုသွားမပေးခဲ့ဘူးဗျ။ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ မရှိတဲ့ မဲပေးပွဲ ပဲဗျာ။ ရပ်ကွက်လူကြီးက လဖက်ရည်ဆိုင်အထိ မဲလိုက်ကောက် တာ၊ ကိုယ်စားမဲထည့်လို့၇တာတွေ က တော့ မြန်မာမှု ပြုလိုက်တဲ့ ဒီမိုကေ၇စီတဲ့တူတယ်ဗျာ…..ဒီလိုပွဲကိုသွားပေးတော့ကော ဘာထူးမှာလဲဗျ….
ကိုနေမျိုး on May 27, 2008 at 7:05 am said:
ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ဒီမဲကပေးလည်း ဘာမှကိုထူးလာမှာမှ မဟုတ်တာ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တော့ ကြက်ခြေခတ် လှလှလေးတစ်ခုတော့ ရအောင် သွားခြစ်လိုက်တယ်။ ဘာရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး…. စိတ်ထဲက တင်းကျပ်နေတာလေးကို ထွက်ပေါက်ပေးလိုက်တာ။ ကျနော်တို့ တရားဝင်ကန့်ကွက်ခွင့်ရတာ ဒါကပထမဆုံးပဲလေ။ ဘာမှတော့ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။